Wawa ngothando kunye watshata umfazi: Into endinokuyenza
sisebenzisa pleased malunga inzala yakho kwi-inkwenkwezi. Ngelishwa, yakho Zincwadi indala zethu site. Nceda sebenzisa senziwe ngoguqulelo Lomsebenzi omtsha we-Intanethi Forte okanye enye i-Zincwadi ezifana i-Firefox okanye ye-chrome. Enkosi Kakhulu. Ngurichard iwele ngothando, intloko phezu heels kuba umfazi, kodwa yena utshate. Kwaye nangona ezimbini rhoqo kuhlangana, ndifuna wena hayi ekubeni i-affair naye. Okanye ekhohlo umyeni. Indlela uya kuza baphume le Meko. Mhlekazi Nkosk. Pierino, mna awile ngothando malunga ngonyaka edlulileyo, kwi watshata umfazi (Olivia). Xa ndabona kuwe, ndaba i-premonition ukuba abe ezinobungozi. Yena ufumana kakuhle ukuba umfazi mna search: kakhulu nabafana, ebukekayo, witty, kwaye yendalo indlela kakhulu erotic. Ndiza a dentist, yena waba nomonde zam, sibuye emva kuxakekwe ngonyango ngenxa thina bobabini knowingly kwaye intentionally, ubude, ngoko ke kamsinya isihloko abucala iincoko. Ngokuqinisekileyo, sinako thetha ngenene okulungileyo kwaye ngamandla. Mna anayithathela rhoqo wajonga kuba umfazi, kodwa mna andinaku qinisekisa ukuba kukho umntu ngubani kanye kanye njenge oku kwaye zonke iimpawu ukuba ndifuna. Kwaye kakhulu ngakumbi. Mna umsebenzi Blankenese njengokuba ukuziphatha therapist kwaye uthando coach yangasese amanqaku kwi-Hamburg. Wam PhD mna benze uphando kwi unxulumano phakathi budlelwane ka-personality kwaye comment kwi-uthando, kwaye ke iincwadi ezimbini malunga uthando ebhaliweyo. Ngokufutshane, izandi ngoko ke stupid. Kodwa yena ke onayo kum twisted kwi-intloko. Nangona kunjalo, wena wathi ngomhla kakhulu ekuqaleni zethu iincoko, ngokucacileyo kwaye unequivocally, ukuba yena utshate, happily watshata, kwaye musa kuya kuba bubulumko ngaphandle umbuzo. Kwaye ukwahlulwa umyeni. Ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, akukho nto kuyo kolawulo kwenzeka, nangona sikulungele ukuqala ukubetha ngakumbi rhoqo kuba ikofu okanye kuba ukuhamba yangasese. Ukuba ndinqwenela ukuba kuthi kube crackles, izakuba kuqhutywa ngokupheleleyo phantsi.
Siphinda kunye ngothando ngamnye enye, waze wachaza kum, njengoko ndiya kuba wabuza ufuna ixesha imizwa yakho. Kodwa ngenxa yokuba ihlala: wena musa ufuna cheat on umyeni. Sihamba waphuma nam, sasivuya dancing, singaba bhala agalele kakhulu kwaye lisoloko kakhulu vula kwaye ngamandla. Kodwa akukho Ithuba ukuba yena amagqabi umyeni, okanye kwi-i-adventure nam ungqubano. Ndinako qinisekisa, nangona kunjalo, hayi i-adventure okanye i-affair kunye yakhe, kodwa ndifuna ukuba abe kunye naye. Ixesha elininzi mna ziyalawuleka Imeko iselwa kakuhle. Umsebenzi distracts kum. Ndine girlfriend, ndiya kuthabatha kakhulu (mna ke zange ngoko ke ngothando njengoko ngoku kwi-Olivia.) Kodwa ngamanye amaxesha despair grabs kum, nangona, ukuba ndafumanisa ilungelo umfazi, kodwa hayi kunye yakhe enako. Bekuya kuba mnandi ngokwenene, Kwaye ndifuna ukuva dependent kwi nabo kuba ndiyazi ukuba andikwazi end eli bali ngoko ke ngokulula. Ndinga ngenene iintlungu. Akunyanzelekanga ukuba bathethe abahlobo malunga izimvo zam, ngenxa yokuba mna silindele undixelele: Yintoni ufuna ukuya apho. Nisolko torturing ngokwakho.
Honestly, ndinqwenela abahlobo Efanayo amazinga, izakuba kuphela sensible indlela, kwaye ndiya bona ngokwam njengokuba rational umntu. Kodwa mna andinaku Olivia, kwaye musa ufuna. Mna kuba ngamandla fantasies kwaye daydreams kunye yakhe, ndiyavuya malunga yakho iindaba, ndikuye ngaphambili zethu onemincili ukuya Kuhlangana kunye ukushiya yonke inkcukacha ukuba Intlanganiso kwakhona, eliwaka phinda-phinda. Mna awukwazi kunika ukuba phezulu. Kufuneka i-unye kwi njani ndinako ngcono ibandakanye le Meko.
Mhlekazi Ngurichard H, ndinika abahlobo bakho ekunene. Bekuya kuba kuphela sensible Khetho ukuba zoba umgca manani. Ngenxa yokuba xa Olivia hayi iqabane lakho, ukufumana enye ukuze ube phupha. Abaninzi neminqweno iya kuhlala unfulfilled. Yakho kubudlelwane ayikho: Akukho kisses, akukho Ngesondo. Hayi ezenzeka ngeveki, akukho everyday ubomi, akukho edibeneyo izigqibo ku enkulu kunye nabalobi imibuzo wobomi. Ndathi, izakuba amanyathelo afanelekileyo ukuba kuncama yonke into. Babeya grieve ixesha elithile, kwaye kwangako mhlawumbi kwakhona, ngakumbi calmness kwaye ngaphakathi uxolo. Kodwa ngehlobo sihamba ukuba ubune akukho uqhagamshelane kunye Olivia. Bebengayi ilahlekile kakhulu ebalulekileyo iphepha ubomi benu, ukuba ngaba stifle uthando kuba yakhe quasi-intentionally. Mhlawumbi kufuneka ukwenza abahlobo kunye unye ukuba omkhulu emotions rhoqo kuba zabo kwexabiso. Sewukufuphi ukuba amava into kakhulu Ezikhethekileyo. Kanye njengokuba kubhaliwe izandi, kubalulekile okokuqala ebomini bakho ukuba uziva ngathi kuba umfazi. Ngehlobo ibe ukuba baya kuthi kwabo, consciously, ukuze ke liechtenstein kunzima ukugcina uqhagamshelane kunye Olivia, ukuze nibe kwi Indlela kunye ezininzi UPS kwaye downs, loneliness, Frustration, sleepless nights, nezinye izinto ezininzi. Kodwa kwelinye icala, uvakalelo, ichukumisa Olivia kubo, baya kuphela ngenene kuza aphile. Ibe ukuba ubuya ngenye indlela kufuneka ibe factual, abaninzi pragmatic compromises kuyenza ebomini bakho. Olivia wakes kuwe phezulu, escorts kuwe ngaphakathi, izisa romanticcomment icala ukuya Ajikelezayo. Andrea kuhlangatyezwana nazo ngexesha indawo yokusebenzela Yannis. Oko sparked phakathi ezimbini. Intensive iingxoxo kunye nights yalandela, kodwa okwangoku, Yannis ufumana okuninzi ngakumbi distant. Inxalenye a problematic budlelwane imbali. Mhlawumbi ungakwazi ukwenza conscious isigqibo ukuthatha disadvantages kwaye downsides le andwebileyo udibaniso. Kwaye internally, ukuthi: ndiyacinga okokuba ndiya kuba ezo zimvo, zibalisa ukusuka engqondweni yam, nto kwaye hayi yoyisa. Kubalulekile ukuba ngaba iingxaki ukuba kwenzeka, ingqalelo kwaye mna-esinenkathalo indlela. Ukuba uva lonely, ungakwazi ukubhala, umzekelo, ngobukho imizwa yakho kuba ngokwakho. Okanye ingaba emidlalo. Okanye benze relaxation qeqesho. Nibe kanjalo fumana yakho yenza isangqa ka-abahlobo umntu abo akuthethi ukuba ibandakanye uthando imixholo kwi rational kwaye ezimnyama-mhlophe, kodwa kanjalo vula kuyo, ukunika irrational Noqhagamshelwano igumbi. Kuya kufuneka okulungileyo ndinqwenela ukuba babelane kunye umntu othe waba efanayo amava. Uthando kakhulu ndinovelwano eliqhutywa, angenaluvo kwaye ngamanye amaxesha irrational. Awunokwazi ulawulo ngubani na kuni ayisasebenzi ukwenza uthando kunye okanye kuba kakhulu lwesivumelwano kwi-cord, ukuba i kstars. Mhlawumbi nawe unako ukuvumela ngokwakho ukuba abe yi-zabo emotions kwaye asukelwa ride ngamanye amaxesha njenge encinane boat kwi-isichotho kwi kwamaza yakho nemvakalelo. Apparently, yinto exabisekileyo kuwe kwaye wena musa ufuna unobuhle kuyo. Enye into: Jonga incopho ukuba Olivia akusebenzi ufuna cheat on umyeni wakho, ukuba awukhange wenze ke kodwa. Ngaba wamxelela into Ebalulekileyo kakhulu malunga ngokwakho kwaye imida yakho. Ndihamba ukuthatha ukuba wena musa bazive internally ukuba izakuba ezilungileyo kuba nawe, okanye ukuba babeya nkqu yaphula xa yena throws eli-siseko. Bekuya kuba kubalulekile ukuba ufuna kuncama yakho lokuba Olivia iya kuba umlingane wakho. Ngaba yenza kwimida kwaye umdlalo zabo unxulumano imithetho kakhulu ngokucacileyo ngobukho, kwaye uzame ukuhamba ngayo ukuze ufumane okungakumbi ubunzulu kwaye vibrancy. Kwaye ezo zimvo ingaba ikakhulu enxulumene ne-intlungu. Eshushu iinkangeleko, Ujulia Pierino Daniela ingaba i-affair nge atshate umntu. Kuba wena, kungumsebenzi omkhulu uthando, kodwa yena akakwazi ufuna ukucwangcisa. Yakhe umtshato ikhangeleka kuba ebalulekileyo kuye, kodwa affair yena akuthethi ukuba ufuna ukunika phezulu. Indlela Daniela ukukhombisa u-oko
← Ividiyo web incoko
Free Dating Zephondo Akukho Imirhumo - Dating zephondo ngaphandle Nokubhalisa okanye Sayina →